Nangataka Famandrihana PornHub Premium Iray ny Mpanivana Aterineto Ao Rosia. 10 no Nomen’ny PornHub Azy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jona 2017 19:04 GMT
Tsy mila Sary Vetaveta . Sary azon'ny rehetra ampiasaina avy amin'ny Pixabay.
Fotoana fohy taorian'ny nanampian'ny Roskomnadzor, mpanao ny asampanivanana aterineto ao Rosia, ny PornHub tao anatin'ny lisitry ny tranonkala nosakanana tamin'ny volana Septambra 2016 (ho fisorohana ireo zaza tsy ampy taona hiditra amin'ny sary mamohafady), nanome tolotra ho an'ny Roskomnadzor ny tranonkala mamohafady an-tserasera PornHub ao Rosia mba hanala ny fanakanana ary hahazo kaonty Premium maimaim-poana izy.
Nandà ny tolo-kevitra ny Roskomnadzor tamin'izay fotoana izay, ary nilaza fa mety hanimba ny fitomboan'ny isan'ny mponina Rosiana ny fijerena sary mamohafady an-tserasera.
Miala tsiny fa tsy any an-tsena isika ary tsy entam-barotra ny fanisana ny mponina.
Kanefa omaly, iray volana mahery kely taorian'ny nanokafan'ny Roskomnadzor indray ny PornHub ao Rosia (tsy maintsy mampiditra ny daty nahaterahany ireo mpisera alohan'ny ahafahany miditra ao amin'ny tranonkala), nilaza i Vadim Ampelonsky, tompon'andraikitra ao amin'ny Roskomnadzor fa vonona ny handray ny tolotry ny PornHub ny sampan-draharahany .
Nilaza i Ampelonsky raha niresaka tao amin'ny sehatry ny Resadresaka An-tserasera SPIK 2017 tao Saint-Pétersbourg niaraka tamin'i Dmitry Kolodin, izay manam-pahaizana nomerika iray ao amin'ny PornHub, fa mbola tsy nahazo ny kaonty Premium maimaim-poana izy. Namaly i Kolodin fa hahazo ny famandrihana izy raha vao misokatra ny foiben'ny PornHub ao Montreal amin'ny Talata.
Loharanon-tsary: Felix Zinatullin, VKontakte.
Araka an'i Zinatullin Feliksa, tale mpanatanteraka ny haivarotra izay nanatrika ny SPIK ary nanamarika ny fifanakalozana ao amin'ny VKontakte, nilaza i Ampeonsky fa mila maka antoka aloha izy raha efa nomen'ireo mpanome tolotra aterineto Rosiana rehetra fahafahana miditra amin'ny Pornhub ny mpisera ho setrin'ny famandrihana Premium .
Androany, nitatitra ny tranonkala TJournal fa nanome an'i Ampelonsky famandrihana Premium maimaim-poana miisa 10 ny PornHub, ary nomeny ny mpiasan'ny TJournal ny dimy amin'izany “ho fanaovana asa soa.”